Global Voices teny Malagasy » Ahoana no fijerintsika ireo loharanom-baovao ato amin’ny Global Voices #MediaLitMondays · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Jolay 2019 18:35 GMT 1	 · Mpanoratra Sahar Habib Ghazi, L. Finch Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Omen'ny Global Voices lanja  [mg] ny fahalianana, ny fahatsorana, ny rariny, ny famindram-po ary ny fifandraisana amin'ny anaran'ny fahatakarana sy ny fisakaizana mihoatra sisintany. Te-hanampy hanangana tontolo iray izay hizarana ny fahefana sy ny fidirana amin'ny fomba mitovy izahay. Ireo no fitsipika mitarika ny fitateram-baovao ataonay.
Mifanohitra amin'ny fikambanam-baovao hafa, ireo vondrona atao an-jorombala sy zara raha fantatra mahalala tsara ny olan'ny fiarahamonina no loharanom-baovaontsika voalohany, fa tsy ireo mpanao politika, na ireo fampahalalam-baovao ao an-toerana, tsy ny fijery mitongilana eo amin'ireo fikambanam-baovao mahazatra na tandrefana; ary manome sy mampifandray  ny loharanombaovaontsika isika isaky ny azo atao izany mba hahafahanao sy ireo mpamaky antsika manana fahefana handinika lalindalina kokoa ny loharanom-baovaontsika ihany koa.
Matoky ny Global Voices fa manan-jo hahazo vaovao betsaka araka izay azo atao ao amin'ny loharanom-baovaontsika ny mpamaky antsika. Voalaza tsara izany ao amin'ny fitsipika arahan'ny famoahan-dahatsoratra .
Ohatra, ao anatin'ity tantara ahitana voambolana 700 navoakantsika ny faran'ny volana Aprily ity: Ny Fahafatesana Manirery an'ilay Lehilahy tena Malaza ao Ethiopia  [mg], nampiditra rohy 13 mankany amin'ireo tranonkalam-baovao eo an-toerana ao Ethiopia, ary koa kaonty media sosialy sy sangan'asa navoakan'ny Ethiopiana isika. Miezaka ny mampiditra rohy iray farafahakeliny isaky ny andalana ao amin'ny tantarantsika isika. Ireto ny dimy amin'ireo loharanom-baovao nampidirana rohy tamin'ity tantara ity:
Ity indray tari-dalana momba ny fanamarinana sy fanekena ireo loharanom-baovao antserasera . Mandrisika ireo mpanoratra izahay mba hampiditra ny antsipirihany ny fanamarinana ataon'izy ireo amin'ny tati-baovaony, satria inoantsika fa zava-dehibe ny misokatra sy mangarahara amin'ny fomba sy ny antony atokisantsika ny votoaty avy amin'ny mpiserasera. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy avy amin'ny tari-dalantsika:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/17/141364/
 manome sy mampifandray: https://community.globalvoices.org/guide/editorial-guides/how-to-write-for-gv/#Sourcing
 fitsipika arahan'ny famoahan-dahatsoratra: https://globalvoices.org/about/editorial-code/
 azo itokisana : https://community.globalvoicesonline.org/guide/editorial-guides/verifying-social-media-content/
 Ny Fahafatesana Manirery an'ilay Lehilahy tena Malaza ao Ethiopia: https://mg.globalvoices.org/2017/05/03/99062/
 Borkena.com : http://www.borkena.com/2017/04/24/assefa-chabo-prominent-writer-researcher-politician-passed-away-aged-73/
 ESAT YouTube stream: https://www.youtube.com/watch?v=7xL2SPaAtW8&feature=share
 gadra noho ny fanehoan-kevitra ao Ethiopia nosoratan'ilay manam-pahaizana Ethiopiana Birtukan Mideksa: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/03/2013318943162458.html
 Fanambarana ny fahafatesana tao amin'ny : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155284938537743&set=a.10153093057742743.1073741826.507322742&type=3&theater
 fanamarinana sy fanekena ireo loharanom-baovao antserasera: https://community.globalvoices.org/guide/editorial-guides/toolbox-for-authors/verifying-social-media-content/